Boliviana 100%: Lahatsary Momba Ny Fiainan’ireo Mpitsoa-Ponenana Ao São Paulo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Novambra 2013 16:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, বাংলা, فارسی, Français, Português
Denílson sy ireo tanora hafa nihaona indray Alahady tao amin'ny foara Kantuta, fihaonana ho an'ny fiarahamonina Boliviana ao São Paulo. Sary: Agência Pública
[ Agência Pública no namoaka voalohany ity lahatsoratra nosoratan'i Alice Riff sy Luciano Onça ity tamin'ny 27 Septambra 2013, izay mitondra ny lohateny hoe 100% Boliviano, mano [boliviana 100%, ry akamako].
Monina ao Bom Retiro, distrika anatin'i São Paulo i Denílson Mamami, 15 taona. Tahaka ireo tovolahy mitovy taona aminy, manonofy hianatra eny amin'ny oniversite, mahazo asa tsara, ho reharehan'ny reniny, hanambady sy hananjanaka izy. Mianatra ao amin'ny sekolim-panjakana João Kopcke, ao afovoan-tanàna izy, metatra vitsivitsy miala ao amin'ny tobin-dasantsy Júlio Prestes. Ankafiziny ny mandany andro miaraka amin'ny olon-tiany sy mihaona amin'ireo namany mba hihaino sy hamoron-kiram-pitiavana sy hip hop. Saingy teraka tao Bolivia i Denilson – fantatra koa amin'ny anarana hoe “Choco” – tahaka ny ampahatelon'ireo mpianatra iray fianarana aminy. Nonina tao Brezila nanomboka tamin'ny faha-9 taonany izy. Tanora boliviana an'arivony na ankizy mpitsoa-ponenana Boliviana tahaka azy no monina ao São Paulo ankehitriny.
Nanombana ny fikambanana «Pastoral do imigrante» fa eo amin'ny 50.000 sy 200.000 eo ny mponina Boliviana avy ao São Paulo (antontan'isa tsy voafaritra tsara satria maro ireo tsy manana taratasy ara-dalàna). Ny ankamaroan'izy ireo dia miasa aminà trano fanjairana izay miorina manerana ny tanàndehibe, saingy mivangongo ao amin'ny distrika afovoany tahaka ny ao Brás sy Bom Retiro. Sokajiana ho fiarahamonina Amerikana-Latina lehibe indrindra monina ao Brezila ny fiarahamonina Boliviana. Tamin'ny taona 2010, raha nanome famotsoran-keloka ho an'ireo mpitsoa-ponenana tsy ara-dalàna ao amin'ny firenena ny governemanta Lula, tamin'ireo fangatahana fizakàna zom-pirenena miisa 42.000, dia avy amin'ireo olom-pirenena Boliviana avokoa ny 17.000 mahery tamin'izany.
15 taona lasa izay, Tonga tao Brezila ny ray aman-drenin'i Choco mba hitady asa. Nandritra ny fahazazany, ny renibeny tao La Paz, renivohitr'i Bolivia no nitaiza sy nikolokolo azy, raha toa ka nikasa honina ao São Paulo hiasa toy ny mpanjaitra ny ray aman-dreniny. Raha mbola 9 taona monja izy, nitondra azy niala tao Bolivia ny reniny, izay efa nisaraka tamin'ny rainy ankehitriny, mba hiara-hipetraka aminy ao amin'ny distrikan'i Retiro Bom, izay toeram-ponenana sady toeram-piasan'izy ireo ao anaty efitra iray aminà trano tranainy misy rihana izay hiarahan'izy ireo mipetraka aminà fianakaviana boliviana hafa. Misy trano fanjairana ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny, izay hiasan'ireo olon-dehibe mandritra ny tontolo andro.
Nipoitra tamin'ny fampahalalam-baovao ireo mpanjaitra Boliviana ao São Paulo taorian'ireo fitarainana isan-karazany momba ny trano fiasana izay toy ny manandevo ireo mpitsoa-ponenana. Saingy nanatontosa fanadihadiana momba ny fomba fiainan'ireo taranaka faharoa Boliviana monina ao an-tanàndehibe ny lahatsary fanadihadiana-fohy boliviana 100% (100% Boliviano, mano). Noho ny hetraketraka iainana isan'andro – ivaivaina ho «Indiana» na « Bolivias” ry zareo izay mamariparitra ny fandratrana ara-batana sy am-bava mihatra amin'izy ireo – ary mizara ny faniriany hijanona ao Brezila sy tsy hiasa amin'ny tontolon'ny fanjaraina.
Jereo ny lahatsary, ahitana dika an-tsoratra portiogey, izay novokarin'ny Pública, fiaraha-miasa amin'i Grão Filmes, ary nampahafantarina tamin'ireo andianà fandaharan'asa Sala de Noticias faha-efatra tao amin'ny Canal Futura.